China Oxytetracycline jekiseni 5% Kugadzira uye Fekitori | Veyong
Chitarisiko: Ichi chigadzirwa chine amber yakajeka mvura pamwe neakakosha hwema.
Pharmacological chiito: Oxytetracycline inorwisa mabhakitiriya ekirasi yetetracycline. Iyo ine simba rakasimba pane gram-yakanaka mabhakitiriya senge Staphylococcus, Streptococcus hemolyticus, Bacillus anthracis, Clostridium tetani uye Clostridium, asi haina kunaka se β-lactams.
Pharmacological chiito: Oxytetracycline inorwisa mabhakitiriya ekirasi yetetracycline. Iyo ine simba rakasimba pane gram-yakanaka mabhakitiriya senge Staphylococcus, Streptococcus hemolyticus, Bacillus anthracis, Clostridium tetani uye Clostridium, asi haina kunaka se β-lactams. Inonyanya kunzwisiswa nemabhakitiriya eGram-negative akadai seEscherichia coli, Salmonella, Brucella naPasteurella, asi isina kunyatsonaka seaminoglycosides uye amide maantibiotiedoro. Ichi chigadzirwa chine zvakare inhibitory mhedzisiro pane rickettsia, chlamydia, mycoplasma, spirochetes, actinomycetes uye zvimwe protozoa.
Usage uye chipimo chemushonga: Intramuscular jekiseni: Imwe dose, 0.2 ~ 0.4ml yezvipfuyo pa1kg yemuviri uremu.
Maitiro akashata: (1) Kushatirwa kwenzvimbo. Iyo hydrochloride aqueous solution yekirasi ino yemishonga ine kushatirwa kwakasimba, uye jekiseni repamuviri rinogona kukonzera kurwadziwa, kuzvimba uye necrosis panzvimbo yejekiseni.
(2) Kukanganisika kwematumbo maruva. Tetracyclines ine hutachiona hwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona, uyezve hutachiona hwechipiri hunokonzerwa neSalmonella inopesana nemushonga kana utachiona husingazivikanwe (kusanganisira Clostridium, nezvimwewo) zvinotungamira kurwara kwakakomba kana kutouraya. Aya mamiriro anowanzoitika mushure meyakakura-dhiza intravenous manejimendi, asi inogona zvakare kuitika mushure meiyo yakaderera-dosi intramuscular jekiseni.
(3) Inokanganisa kukura kwemeno nemapfupa. Tetracyclines inosanganiswa necalcium mushure mokupinda mumuviri, uye inoiswa mumazino nemapfupa pamwe necalcium. Iyi kirasi yemishonga zvakare zvakareruka kupfuura nepascenta uye kupinda mumukaka. Naizvozvo, mhuka dzine nhumbu, mhuka dzinonwisa uye mhuka diki dzinorambidzwa, uye mukaka wemombe dzinomwisa unorambidzwa kutengeswa panguva yemushonga
(4) Kukuvara kwechiropa neitsvo. Iyi kirasi yemishonga ine chepfu mhedzisiro pachiropa uye itsvo maseru. Tetracycline mishonga inorwisa mabhakitiriya inogona kukonzera kutsamira kwedosi mune dzakasiyana mhuka
Zvepabonde zveitsvo basa rinochinja.
(5) Anti-metabolism maitiro. Tetracycline zvinodhaka zvinogona kukonzera azotemia, uye inogona kuwedzererwa nekuvapo kwesteroid zvinodhaka. Iyi kirasi yemishonga
Inogona zvakare kukonzera metabolic acidosis uye kusaenzana kwe electrolyte.
1) Ichi chigadzirwa chinofanira kuchengetwa kure nechiedza uye chisina mweya, uye chengetwa munzvimbo inotonhorera, ine rima uye yakaoma. Dzivisa B kujekesa kwechiedza. Usashandise midziyo yesimbi kumishonga.
(2) Mabhiza anogona zvakare kukura gastroenteritis mushure mejekiseni, saka inofanira kushandiswa nekuchenjerera.
(3) Dzivisa kushandiswa apo chiropa uye itsvo zvinoshanda zvemhuka zvakakuvara zvakanyanya.
Mazuva makumi maviri nemasere emombe, hwai nenguruve; Mazuva manomwe ekusiiwa kwenguva
Pasuru: 50ml, 100ml
Pashure: LA Oxytetracycline jekiseni 20%
Zvadaro: Penstrep jekiseni 20%